Warshad dhalista Ball jeexjeexa Deep Groove Ball-saarayaasha, shirkado cusub
Wareegyada kubbadda hoose ee jeexdin waxay ku habboon yihiin xawaare sare ama xitaa xawaare aad u sarreeya, waana kuwo aad u adag oo aan dayactir joogto ah lahayn. Noocan qaadista wuxuu leeyahay isku dheelitirnaan yar oo isku dheelitiran, xawaare xadka sare, iyo kala duwanaansho cabirro kala duwan iyo qaabab. Waxaa loo adeegsadaa qalabka saxda ah, matoorrada qeylada hoose, gawaarida, mootooyinka iyo warshadaha guud ee mashiinnada. Waa nooca ugu ballaaran ee loo isticmaalo qaadista warshadaha mashiinada. Badanaa waxaad xambaartaa culeyska shucaaca, laakiin sidoo kale wuxuu qaadi karaa qadar cayiman oo xamuul ah.
Wareegyada kubbadda hoose ee jeexdin waxay ku habboon yihiin xawaare sare ama xitaa xawaare aad u sarreeya, waana kuwo aad u adag oo aan u baahnayn dayactir joogto ah. Noocan qaadista wuxuu leeyahay isku dheelitirnaan yar oo isku dheelitiran, xawaare xadka sare, iyo kala duwanaansho cabirro kala duwan iyo qaabab. Waxaa loo adeegsadaa qalabka saxda ah, matoorrada qeylada hoose, gawaarida, mootooyinka iyo warshadaha guud ee mashiinnada. Waa nooca ugu ballaaran ee loo isticmaalo qaadista warshadaha mashiinada. Badanaa waxaad xambaartaa culeyska shucaaca, laakiin sidoo kale wuxuu qaadi karaa qadar cayiman oo xamuul ah.